မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook ပေါ် ရောက်လာ | ဧရာဝတီ
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook ပေါ် ရောက်လာ
ကျော်ခ| November 2, 2012 | Hits:10,098
25 | | မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook စာမျက်နှာ http://www.facebook.com/mpfpage
လူမှု ဆက်သွယ်ရေး ကွန်ရက် Facebook စာမျက်နှာပေါ်ကို မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း စာမျက်နှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီး ၎င်းတို့၏ လုပ်ဆောင်ချက် လှုပ်ရှားမှုများကို ယမန်နေ့မှစ၍ တင်ပြနေပြီဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အမည်ဖြင့် Facebook စာမျက်နှာကို ယခုနှစ် စက်တင်ဘာလ ၁၇ ရက်နေ့က စတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သော် လည်း ယမန်နေ့ကမှ စတင်ကာ ၎င်းတို့ လှုပ်ရှားမှုများ၊ အကြံပြုချက်များ၊ ဖြေရှင်းချက်များ၊ တရားခံပြေး ဝရမ်းစာများလွှင့်တင်နေခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့သည် အမှုအခင်များ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်ရာတွင် အဂတိလိုက်စားမှု၊ ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနှင့် အမှုဖျောက်ဖျက် မှုတို့တွင် နာမည်ဆိုးနှင့် ကျော်ကြားခဲ့သည်။ အထူးသဖြင့် နအဖ စစ်အစိုးရလက်ထက်တွင် စစ်တပ်နှင့် အတူ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ သည်လည်း ပြည်သူလူထု၏ ငြိုငြင်မှုကို ခံခဲ့ရသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့က Facebook အသုံးပြုလာမှု၊ ၎င်းတို့၏ လှုပ်ရှားမှု၊ ဆောင်ရွက်မှုများ၊ ရှေ့ဆက်ဆောင်ရွက်မည့် အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်၍ ဖော်ပြနိုင်ရန်အတွက် နေပြည်တော်ရှိ ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရဲချုပ်ရုံး အပါအဝင် သက်ဆိုင်ရာ တာဝန်ရှိသူများကို ဆက်သွယ်မေးမြန်းခဲ့သော်လည်း ဖြေကြားခြင်း မရှိပေ။
သို့သော်လည်း ၎င်းတို့ Facebook စာမျက်နှာတွင် ရဲဝန်ထမ်းများ၏ အဂတိလိုက်စားမှု၊ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှု၊ ပြည်သူလူထုကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှု၊ လူမှုရေးဖောက်ပြန်မှု၊ မူးယစ်/ဖောက်ဖျက်မှု၊ အမှုမဖွင့်ပေးမှု၊ ခိုးမှု အပါအဝင် အမှု အမျိုးအစားပေါင်း ၁၇ မျိုး တွင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း စုစုပေါင်း ၁၃၈၁ မှုရှိပြီး အရာရှိ ၄၁၅ ဦး၊ အခြားအဆင့် ၁၂၄၆ ဦးအား စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်မှုဖြင့် အရေးယူထားကြောင်း ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားသည်။
ယင်းသို့ စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည့် ရဲအရာရှိများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို အရေးယူရာတွင် ထောင်ချခြင်း၊ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှ ထုတ်ပယ်ခြင်း၊ ရာထူးလျှော့ချခြင်းနှင့် အခြားပစ်ဒဏ်များကို အသီးသီး အပြစ်ပေးချမှတ်ကြောင်းလည်း ဖော်ပြထားသည်။
ထို့ပြင် ၂၀၁၁ ခုနှစ်အတွင်း လူသတ်မှု ၁၂၄၅ မှုအပါအဝင် အမှုကြီး ၁၀ မျိုး၌ စုစုပေါင်း ၂၂၉၀ မှုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း၊ လူသတ်မှု ၁၂၄၅ မှုအနက် ၁၁၂၁ မှုအား ဖော်ထုတ်အရေးယူနိုင်ခဲ့ကြောင်း၊ တရားခံဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်း မရှိသေးသော အမှုများကိုလည်း အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး ကြိုးစားနေကြောင်း၊ ထိုအခြေအနေအား ပြည်သူများ အနေဖြင့် နားလည်ပေးနိုင်မည်ဟု မျှော်လင့်ကြောင်းများ ပါရှိသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ Facebook စာမျက်နှာပေါ်တွင် Facebook သုံးစွဲသူ တချို့က အကြံပြုခြင်း၊ မှုခင်းဖြစ်ပွားမှုများကို အကြောင်းကြားခြင်းများ ရှိသကဲ့သို့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုသူများလည်း ရှိသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့က ၎င်းတို့အား အကြံပြုချက်များကို တုံ့ပြန်ဖြေကြားမှုများ ပြုလုပ်ပေးသကဲ့သို့ ကြမ်းတမ်းစွာ ပြောဆိုမှုများမပြုလုပ်ကြရန်လည်း မေတ္တာရပ်ခံထားသည်ကို တွေ့ရ သည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းချုပ်ပြုစုရာတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာကို အခြေခံပြုစုခြင်းမရှိကြောင်း၊ အမှုကြီး/ငယ် အမျိုးအစား၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများ ကိုသာ အခြေတည်၍ စာရင်းပြုစုသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“ဘာသာရေးနှင့် လူမျိုးရေးကိစ္စများသည် ထိခိုက်ရှလွယ်သော ကိစ္စများဖြစ်ကြပါသည်။ မည်သည့် ဘာသာဝင်/လူမျိုးမဆို ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်ပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို လူမျိုး/ဘာသာမခွဲခြားဘဲ တရားဥပဒေဖြင့်သာ အရေးယူဆောင်ရွက် ပါသည်”ဟု ၎င်းတို့ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နိုင်ငံတွင်း လူထုငြိုငြင်မှု ခံနေရသော ရဲတပ်ဖွဲ့အနေဖြင့် လူမှုဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်အပေါ် တက်လာပြီး ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်မှု များကို အများသိရှိစေရန်ချပြလာခြင်းကို ကြိုဆိုသူများလည်းရှိကြသည်။
“နိုင်ငံတိုင်းရဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့တိုင်းဟာ နာမည်ပျက် အများအပြားရှိတာ ငြင်းလို့မရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့် အခုလို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ လုပ် ရပ်မျိုး လုပ်လာတာကိုကြည့်ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အကြီးအကဲတွေ အနေနဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် တဦးချင်းဆီမှာ ကောင်းသထက် ကောင်း အောင် လုပ်ချင်တဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မကင်းနိုင်တဲ့ အမှားတွေကို လျှော့ချချင်တဲ့ ရည်ရွယ်ချက်တွေ တကယ်ရှိနေပြီလို့ ယူဆတဲ့ အတွက် တကယ် ကောင်းလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်”ဟု Facebook သုံးစွဲသူ တဦးဖြစ်သူ ကိုကျော်စွာ က Facebook စာမျက်နှာတွင် မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုထားသည်။
သို့သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့သည် သီးခြားအဖွဲ့အစည်းတခုအဖြစ် ရပ်တည်ခြင်းမျိုး မဟုတ်ဘဲ ၂၀၀၈ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေအရ လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအားလုံး တပ်မတော်အောက်တွင်ရှိရမည်ဆိုသည့် အချက်ကို ကျေနပ်မှုမရှိဟု ကိုကျော်စွာက တဆက်တည်း မှတ်ချက်ပေး ပြောဆိုထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံကို မြန်မာမင်းများက ကိုယ့်ထီးကိုယ့်နန်းဖြင့် အုပ်ချုပ်ခဲ့သော ကာလများတွင် နိုင်ငံတော်အတွင်း တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေး နှင့်ငြိမ်ဝပ်ပိပြားရေးကို မြို့စား၊ မြို့ဝန်၊ စစ်ကဲ၊ နာခံ၊ ကွမ်းဘိုးထိန်းဝန်၊ မြို့သူကြီးနှင့် ရွာသူကြီး စသောပုဂ္ဂိုလ်များဖြင့် ထိန်းသိမ်း စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြသည်။ နိုင်ငံတော် အတွက် အရေးကြုံပါက စစ်အရန်အင်အားဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားရှိ ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ရဲ တပ်ဖွဲ့ ၏ Facebook စာမျက်နှာတွင် ဖော်ပြထားသည်။
၁၈၈၅ ခုနှစ်တွင် မြန်မာတနိုင်ငံလုံး ဗြိတိသျှကိုလိုနီ နယ်ချဲ့ လက်အောက်သို့ ကျရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ဗြိတိသျှ ကိုလိုနီ ၏ ရဲ လုပ် ငန်း စနစ်ကို စတင်ခဲ့သည်။ ထို အချိန်က ရဲတပ်ဖွဲ့ကို ဗမာ ရဲအဖြစ် သိခဲ့ကြကြောင်း၊ ၁၉၆၄ ခုနှစ်တွင် ပြည်သူ့ရဲတပ်ဖွဲ့ အဖြစ်ပြန် လည် ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး ၁၉၉၅ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ ၁ ရက်နေ့တွင် မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့အဖြစ် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ကြောင်းလည်း ဖော်ပြ ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ Facebook စာမျက်နှာ http://www.facebook.com/mpfpage
RCSS ဥက္ကဋ္ဌ အဖြစ် ဒု ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယွက်စစ်ကို ပြန်လည်ခန့်အပ်
ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြင်ဆင်ရေး တပ်မတော်သား ကိုယ်စားလှယ်များ ကန့်ကွက်
NCA စာချုပ်ကို ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲ မတိုင်ခင် လက်မှတ်ထိုးရန် UN တိုက်တွန်း
8 Responses	LeaveaReply Cancel reply	Your email address will not be published. Required fields are marked *Comment Name * Email * Website bugging November 2, 2012 - 7:35 pm	အွန်လိုင်း ကနေ ညှစ်တော့ မယ်ပေါ့ 
Reply	ဟန်တင့် November 2, 2012 - 9:15 pm	စစ်မှန်တဲ့မီဒီယာရယ်လို့…”မြန်မာပြည်မှာ ဧရာဝတီပါပဲ”…မမှန်တဲ့သူတွေကတော့ ဘယ်ကြိုက်ပါ့မလဲ…..ဒါကတော့ ထုံးစံပါပဲ…”ကြိုဆိုပါသည် ဧရာဝတီ”…. ခွေးတွေတွေအများကြီးကြားထဲရောက်လို့ ၀ိုင်းဟောင်ကြတာဟာ မထူးဆန်းပါဘူး….
Reply	aaa November 2, 2012 - 9:42 pm	ကောင်းတာပေါ့။နောက်ဆိုရင် ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆင့် မက်ဆေ့ခ်ျ နဲ့ဈေးညှိလို့ပိုကောင်းသွားတာပေါ့။ အဲလေ…ဟုတ်ပေါင်…ဖေ့စ်ဘွတ်ကနေတဆင့် မက်ဆေ့ခ်ျ နဲ့အမှုဖွင့်နိုင်တာပေါ့..လို့ပြောမလို့ပါ။
Reply	မြန်မာ တိုင်းရင်းသူ November 3, 2012 - 2:16 am	မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် ပြစ်မှုကျူးလွန်သူ တရားခံများနှင့် ပတ်သက်၍ စာရင်းချုပ်ပြုစုရာတွင် လူမျိုး၊ ဘာသာကို အခြေခံပြုစုခြင်းမရှိကြောင်း၊ အမှုကြီး/ငယ် အမျိုးအစား၊ ပညာတတ်ခြင်း၊ မတတ်ခြင်းနှင့် ပြစ်မှုဖြစ်ပွားရခြင်း၏ အကြောင်းအရင်းများ ကိုသာ အခြေတည်၍ စာရင်းပြုစုသည်ဟုလည်း ဆိုသည်။
“မည်သည့် ဘာသာဝင်/လူမျိုးမဆို ပြစ်မှုကျူးလွန်တတ်ပါသည်။ ပြစ်မှုကျူးလွန်သူများကို လူမျိုး/ဘာသာမခွဲခြားဘဲ တရားဥပဒေဖြင့်သာ အရေးယူဆောင်ရွက် ပါသည်” ….
အလွန် ကောင်းမွန် သင့်လျောတဲ့ အခြေခံ အချက်ပါ။
ဘယ်သူမှ ဥပဒေ အထက်မှာ မရှိစေပဲ အပြစ်ကျူးလွန်သူများကို တကယ်ဖမ်း၊ တကယ် အပြစ်ပေးနိုင်အောင် ကျိုးစားကြပါ။ အပြစ်ကျူးလွန်သူဆိုတာ ကာယကံမြောက် တကယ်လုပ်သူသာမက ငွေ ပေး ခိုင်းစေသူတွေလဲ အပြစ်ကျူးလွန်သူထဲမှာ ပါတယ်နော်။
Reply	sky November 3, 2012 - 10:54 am	facebook ပေါ်ကနေပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးမယ့်သောက်ရူးတပ်ဖွဲ့ရောက်လာပြီလား။ ဆဲမိတဲ့သူရဲ့account ကတော့မွှေခံရပြီ သာ မှတ်။
Reply	Kopyichit November 3, 2012 - 8:20 pm	we want real people’s police. Require real People’s police for democracy .
Require to install modern weapons in People’s Police force.
Found high rank in police from military. Military uniform changed to police uniform only.
People want to know ” who killed5people stayed at university avenue road?”
We no doubt people’s police know that case.
Welcome people’s police appeared on face book.
Reply	tazan November 7, 2012 - 2:34 pm	ရဲလက်စွဲ အတွဲ (၂) နဲ့အညီ နေထိုင် ကျင့်ကြံနိုင်ကြပါစေ။
Reply	ye lay January 24, 2013 - 4:41 pm	ရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ ဒီလိုလုပ်ဆောင်မှုတွေရှိလာတာ တိုးတက်လာတယ်လိုယူဆပါတယ် နိူင်ငံတကာနဲရင်ပေါင်တန်းနိူင်တဲ့ ရဲတပ်ဖွဲ့ကြီးဖြစ်ပါစေလို့ ဆန္ဒပြုလိုက်ပါတယ်
၂၁ ရာစုပင်လုံ ညီလာခံ အဖွင့်မိန့်ခွန်း ပြောရန် UNFC တောင်းဆိုမှု အစိုးရခွင့်မပြု
မြန်မာ-အိန္ဒိယဆက်ဆံရေး ကြားက နယ်ခြားပြဿနာ
IS ခြိမ်းခြောက်မှု ရှိ၍ ၂၁ ရာစု ပင်လုံ ညီလာခံ လုံခြုံရေး အထူးတိုးမြှင့်မည်ဟု ဆို
၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံတွင် မြောက်ပိုင်း မဟာမိတ် ၃ ဖွဲ့ မပါဝင်တော့ဟု အစိုးရပြော
ငြိမ်းစုစီ ဥပဒေကြမ်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် အတည်ပြု
ကူကီးတိုင်းရင်းသားဖိုရမ် ဦးဆောင်သူများကို တရားစွဲမည်
ရွေးကောက်ပွဲ အနိုင်မရသည့် ပါတီများ ၂၁ ရာစု ပင်လုံညီလာခံ တက်ရန် မသေချာ